चिनियाँ भ्याक्सिनको सबैभन्दा ठूलो ट्रायल सफल, यूएईमा पनि दिइयो आपतकालीन स्वीकृति - Himali Patrika
चिनियाँ भ्याक्सिनको सबैभन्दा ठूलो ट्रायल सफल, यूएईमा पनि दिइयो आपतकालीन स्वीकृति
हिमाली पत्रिका ३० भाद्र २०७७, 1:43 pm
काठमाडौं। चीनको कम्पनी सिनोफार्मले विकास गरेको कोरोनाभाइरस भ्याक्सिनले संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि ‘आपतकालीन प्रयोगका लागि स्वीकृति’ पाएको छ । यहाँ यो भ्याक्सिनको ट्रायल गरिएको थियो जुन कोरोनाभाइरस भ्याक्सिनको अहिलेसम्मकै ठूलो ट्रायल थियो ।
यहाँको ट्रायलमा नेपालीसहित १२५ देशका ३१ हजार स्वयंसेवक सहभागी थिए । युएइको स्वास्थ्य तथा प्रतिरक्षा मन्त्रालयले सोमबार यो भ्याक्सिन फ्रन्टलाइन कार्यकर्ताको लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको हो ।
खलीज टाइम्सका अनुसार अब यो भ्याक्सिन भाइरसको सम्पर्कमा आउने उच्च जोखिममा रहेका फ्रन्टलाइन कार्यकर्ताहरुले पाउनेछन् । ‘यो भ्याक्सिनको आपतकालीन स्वीकृति नीति र कानुनको पूर्ण पालना गरेर दिइएको हो जसले यो भ्याक्सिनको द्रुत स्वीकृतिका लागि सहयोग गर्छ’ युएइका स्वास्थ्य तथा प्रतिरक्षा मन्त्री अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल ओवाइसले भने ‘पहिलो र दोस्रो फेजको ट्रयलका सबै नतिजाले यो सुरक्षित, प्रभावकारी र सही प्रतिक्रियातर्फ अगाडि बढिरहेको देखाएका छन् ।’ उनले यो भ्याक्सिनको आपतकालीन स्वीकृति ‘निश्चित मापदण्डको एउटा सेट पूरा गरेपछि भ्याक्सिन विकासकर्तासँग निकटको सहकार्यपछि’ दिइएको बताएका छन् ।
नेशनल क्लिनिकल कमिटी फर कोभिड १९ का अध्यक्ष तथा भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलका प्रिन्सिपल इन्भेस्टिगेटर डा. नवल अल काबीले क्लिनिकल ट्रायल ‘सबैजसो परीक्षणहरु सफल हुँदै सही दिशामा अगाडि बढिरहेको’ बताएकी छिन् । ‘अध्ययन सुरु भएपछि ६ हप्ताभन्दा कम समयमा १२५ देशको प्रतिनिधित्व गर्दै ३१ हजार स्वयंसेवक ट्रायलमा सहभागी भए । देखिएका साइड इफेक्टहरु निकै हल्का र अरु भ्याक्सिनहरुमा जस्तै पूर्वानुमान गरिएकै छन् । कुनै जटिल साइड इफेक्ट देखिएका छन्’ उनले भनिन् ।
अधिकारीहरुका अनुसार यो भ्याक्सिनको मूल्यांकन ‘आपतकानीन र सीमित प्रयोगको इजाजत सम्बन्धी नियम, लक्षित समूहको पहिचान, उत्पादनको प्रकृति, क्लिनिकल अध्ययनको डाटा र सबै उपलब्ध जैज्ञानिक प्रमाणहरु’को आधारमा दिइएको हो ।
‘स्वास्थ्य अधिकारीहरुले भ्याक्सिन विकासकर्ताहरुसँगको सहकार्यमा भ्याक्सिनको सुरक्षा, प्रभावकारिता र गुणस्तर नियन्त्रणका सबै प्रक्रियाहरु पूरा गरेका छन्’ डा. अल काबीले भनिन् । कोभिड १९ निष्क्रिय भ्याक्सिनको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल अबु धाबीबाट जुलाइ १६ मा सुरु भएको थियो ।
जुलाइमा अबु धाबी हेल्थ सर्भिस कम्पनी (सेहा) ले अबु धाबीको स्वास्थ्य विभाग, जी ४२ हेल्थकेयर र भ्याक्सिन विकास गर्ने चिनियाँ कम्पनी सिनोफार्मसँगको सहकार्यमा भ्याक्स्निको तेस्रो फेजको क्लिनिकल ट्रायल सुरु गरेको थियो ।
सेहाका विशेषज्ञ स्वास्थ्य अभ्यासकर्ताको एक टिमले यो ट्रायलको व्यवस्थापन गरिरहेको छ । स्वयंसेवकहरुको ४२ दिनदेखि निरन्तर निगरानी भइरहेको छ । उनीहरु यो अवधिमा जाँचका लागि कम्तीमा १७ पटक हेल्थ सेन्टर जानुपर्ने हुन्छ । यो अवधिमा स्वयंसेवक देशबाहिर जान पाउने छैनन् र स्वास्थ्य संस्थाको सहज पहुँचमा बस्नुपर्नेछ ।